ဒီတစ်နှစ်တည်းမှာရရှိလာတဲ့ သူမရဲ့ရင့်ကျက်လာမှုတွေအကြောင်း စီကာပတ်ကုံးပြောပြလာတဲ့ ယဉ်လတ် – Cele Snap
သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ်ကတော့ နိုင်ငံတော်အကျိုးပြုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ အများဆုံးပါဝင်သရုပ်ဆောင်တတ်သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယဉ်လတ်ဟာ လက်ရှိမြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်းးဆိတ်ဆိတ်နေခဲ့တာ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယဉ်လတ်ကတော့ တစ်နှစ်တည်းနဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာ တန်တယ်လို့ ဆိုလာ ပါတယ်။
ယဉ်လတ်က “ခက်ခဲတယ် .. ဒါပေမယ့် မင်းအတွက် ကြေနပ်တယ် မေတ္တာထားရင် ရန်သူတောင် မိတ်ဆွေဖြဈလာနိုင်တယ်ဆိုသလိုမြိုးပဲ အရာရာကိုအေကာင်းဘက်ကေတွးရင် ဖြဈလာသျမှအခက်ခဲတိုင်းသည် လွပနေမယ် ခွန်အားဖြဈစေနေလိမ့်မယ်။ နွဈကုန်တော့မယ်.. ဒီနွဈအတွင်း ငါဘျာမားရလိုက်လဲ..?ရတာပေါ့ စိတ်သောကဖြဈစရာတွေ , ဒုက္ခတွေရလိုက်တာပေါ့ လို့တွေးနေရင် ဒီနွဈဆိုတာကြီးက အဓိပ္ပါယ်ရွိတော့မွာမဟုတ်ဘူး.. အဲ့လိုတွေးမယ့်အစား…ငါဘာတွေရ လိုက်လဲ ? ”
“ရတာပေါ့အများကြီး…ချစ်တယ်လို့ပြောပြီး ကျောခိုင်းတဲ့သူအတွေအကြောင်းသိရတယ်။ ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်နဲ့အတူ ဘယ်သူတွေကျန်ခဲ့လဲသိရတယ်။ ကိုယ်ဘယ်လောက်အထိပျော့ညံ့တယ် မာကျောတယ်ဆိုတာလည်းသိရတယ်။ ဘယ်လို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပျော်ရွှင်အောင်နေရမလဲဆိုတာ သိရတယ်။ အပြုံးတွေသေသွားပြီလို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် ခက်ခဲပေမယ့် ငါပြန်ပြုံးနိုင်တာကိုလည်း သိရတယ်လို့တွေးလိုက်ရင် ဒီနှစ်က အဓိပ္ပါယ်ရှိသွား လိမ့်မယ်။
ကိုယ့်အမြင်ပြောရရင် တကယ်တော့ သုံးလေးနှစ်စာကို တစ်နှစ်ထဲနဲ့ ကြုံတွေ့ရတာ တန်ပါတယ်လေ။ ​တစ်နှစ်တည်းနဲ့ ရင့်ကျက်သင့်သလောက်ရင့်ကျက်သွားတာပေါ့…တန်ပါတယ်…🖤🤍” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။ယဉ်လတ်ကတော့ သူများတွေ သုံးလေးနှစ်စာလောက်ခံရမယ့် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကို တစ်နှစ်တည်းနဲ့ကြုံခဲ့ရတာကြောင့် ရင့်ကျက်သင့်သလောက်ရင့်ကျက်သွားတာမို့ တန်ပါတယ်ဆိုပြီး ပြောလာတာပဲဖြစ် ပါတယ်။
Source: YIN LET ‘s’s f
သရုပျဆောငျ ယဉျလတျကတော့ နိုငျငံတျောအကြိုးပွုရုပျရှငျဇာတျကားတှမှော အမြားဆုံးပါဝငျသရုပျဆောငျတတျသူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ ယဉျလတျဟာ လကျရှိမွနျမာ့နှဦေးတျောလှနျရေးမှာလညျး ဆိတျဆိတျနခေဲ့တာ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျးသိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ အဲ့ဒါကွောငျ့လညျး ပရိသတျတှရေဲ့ဝဖေနျမှုကို ပွငျးပွငျးထနျထနျရရှိခဲ့တာဖွဈပွီး ယဉျလတျကတော့ တဈနှဈတညျးနဲ့ ဝဖေနျမှုတှကေိုကွုံတှခေဲ့ရတာ တနျတယျလို့ ဆိုလာ ပါတယျ။
ယဉျလတျက “ခကျခဲတယျ .. ဒါပမေယျ့ မငျးအတှကျွကနေပျတယျ မတ်ေတာထားရငျ ရနျသူတောငျ မိတျဆှဖွေဈလာနိုငျတယျဆိုသလိုမွိုးပဲ အရာရာကိုအကောငျးဘကျကတှေးရငျ ဖွဈလာသမြှအခကျခဲတိုငျးသညျ လှပနမေယျ ခှနျအားဖွဈစနေလေိမျ့မယျ။ နှဈကုနျတော့မယျ.. ဒီနှဈအတှငျး ငါဘာမြားရလိုကျလဲ..?ရတာပေါ့ စိတျသောကဖွဈစရာတှေ , ဒုက်ခတှရေလိုကျတာပေါ့ လို့တှေးနရေငျ ဒီနှဈဆိုတာကွီးက အဓိပ်ပါယျရှိတော့မှာမဟုတျဘူး.. အဲ့လိုတှေးမယျ့အစား…ငါဘာတှရေ လိုကျလဲ ? ”
“ရတာပေါ့အမြားကွီး…ခဈြတယျလို့ပွောပွီး ကြောခိုငျးတဲ့သူအတှအေကွောငျးသိရတယျ။ ခကျခဲတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျနဲ့အတူ ဘယျသူတှကေနျြခဲ့လဲသိရတယျ။ ကိုယျဘယျလောကျအထိပြော့ညံ့တယျ မာကြောတယျဆိုတာလညျးသိရတယျ။ ဘယျလို ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပြျောရှငျအောငျနရေမလဲဆိုတာ သိရတယျ။ အပွုံးတှသေသှေားပွီလို့ ထငျခဲ့ပမေယျ့ ခကျခဲပမေယျ့ ငါပွနျပွုံးနိုငျတာကိုလညျး သိရတယျလို့တှေးလိုကျရငျ ဒီနှဈက အဓိပ်ပါယျရှိသှား လိမျ့မယျ။
ကိုယျ့အမွငျပွောရရငျ တကယျတော့ သုံးလေးနှဈစာကို တဈနှဈထဲနဲ့ ကွုံတှရေ့တာ တနျပါတယျလေ။ ​တဈနှဈတညျးနဲ့ ရငျ့ကကျြသငျ့သလောကျရငျ့ကကျြသှားတာပေါ့…တနျပါတယျ…🖤🤍” ဆိုပွီး ပွောလာပါတယျ။ယဉျလတျကတော့ သူမြားတှေ သုံးလေးနှဈစာလောကျခံရမယျ့ ဝဖေနျတိုကျခိုကျမှုတှကေို တဈနှဈတညျးနဲ့ကွုံခဲ့ရတာကွောငျ့ ရငျ့ကကျြသငျ့သလောကျရငျ့ကကျြသှားတာမို့ တနျပါတယျဆိုပွီး ပွောလာတာပဲဖွဈ ပါတယျ။